मैले पिकेसित गरेको चुनावी व्यापार जातिको निम्ति हो- विमल गुरुङ - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारमैले पिकेसित गरेको चुनावी व्यापार जातिको निम्ति हो- विमल गुरुङ
February 28, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
उनले खुलेर भने, ‘पिकेसित भएको सबै कुरा म खुलेर भन्न सक्दिन। उनी रणनीतिकार भएकोले उनीसित निरन्तर बात गर्नैपर्छ। उनी त्यसै बङ्गाल आएका होइनन्। पिकेसितको मेरो सम्बन्धबारे आज म बोल्न चाहन्न। जब भोलि काम हुन्छ तब भन्ने कुरा हो।’ पहाड, तराई र डुवर्सका गोर्खा जनतालाई पिकेबारे राम्रो जानकारी छैन। पिके चुनावी व्यापारी हुन् भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन। विमल गुरुङले पिकेसित भएको आफ्नो चुनावको व्यापारबारे खुलेर भन्ने कुरा पनि आएन। यसैले विमल गुरुङले खुलेर केही भनिहालेका छैनन्। तर कुरै कुरामा भने केही कुरा भने चुहाएकै छन्। खोजखबरले गरेको प्रश्नको उत्तरमा विमल भन्छन्, ‘मैले पिकेसित गरेको चुनाउको व्यापार जातिको भलाईको निम्ति हो।’ चुनाउको व्यापारमा जातिको भलाई कसरी हुन्छ? त्यो त विमल गुरुङ नै जानुन्। तर विमलले यो व्यापार निक्कै सोचिसम्झी गरेको भने स्पष्ट छ। ‘पिकेसित गरेको व्यापार मेरो व्यक्तिगत व्यापार हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यसको निम्ति मैले पोलिटिकल करियर दाउमा हालेको छु। सम्पूर्ण लुटाएको छु। किन भने राजाजस्तो मान्छे भिखारीजस्तो भएको छु।’ जे होस्, विमल गुरुङले कमसेकम यसपल्ट पिकेसित चुनावी व्यापार गरेको स्वीकारोक्ति दिए।
आनन्दबाजार पत्रिकाले लेखेको छ, ‘2019 मा विमल समूहले प्रशान्त किशोरलाई भेटेका हुन्, जतिखेर पिकेले पश्चिम बङ्गालमा तृणमूल काङ्ग्रेसको चुनावी रणनीति बनाउने विषयमा ममता व्यानर्जीसित डिल गरिसकेका थिए। दिल्लीबाट आएका विमल गुरुङले तृणमूलको एउटा मन्त्रीको कार्यालयमा सोझै पिकेसित भेटे। पिकेले नै कोलकातामा होटल बन्दोबस्त गरेका हुन् र पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। त्यहीदिनदेखि पिकेसित विमलको चुनावी डिल भएको हो।’
तृणमूलसित नजिकबाट साँठगाँठमा रहेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा-2 का अध्यक्ष विनय तामाङ भन्छन्, ‘विमल गुरुङको तृणमूल काङ्ग्रेससित गठबन्धन होइन, पिकेसित भएको व्यापारिक डिल मात्र हो। नत्र विमल गुरुङले तृणमूलसित गठबन्धन गरेको प्रमाण पेस गरोस्।’
विमल गुरुङसित अहिले बारम्बार जोडिएको नाम हो-प्रशान्त किशोर। प्रशान्त किशोरबारे सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ। पहाड, तराई र डुवर्सका जनतालाई लाग्न सक्छ, पिके ममता व्यानर्जीका पार्टीका कुनै नेता हुन्। वा लाग्नसक्छ, यिनी कुनै राष्ट्रीय नेता हुन्। पिके यस्तो केही होइनन्। उनी शुद्ध व्यापारी हुन्।
उनको व्यापार भनेको चुनाउ हो। उनी कसैलाई पनि रणनीति बेच्छन्। चुनाउ जिताउँछन् अनि करोडौं कुम्ल्याउँछन्।
प्रशान्त किशोर अहिले ममता व्यानर्जीको राजनैतिक रणनीतिकार हुन्। ममता व्यानर्जीले रोडौं रुपियाँ दिएर पिकेलाई चुनाउ जित्न रणनीति बनाउन ल्याएका हुन्।
उनको संस्थाले करोडौं पैसा लिएर तृणमूललाई चुनाउ जिताउने रणनीति बनाइरहेका छन्।
चुनावी रणनीति बनाउने यस्तो व्यापार उनले 2014 देखि शुरु गरेका हुन्।
तर 2017 को विधानसभा चुनाउमा काङ्ग्रेसलाई उनले उत्तर प्रदेशमा जिताउन सकेनन्। यद्यपि पञ्जाबमा काङ्ग्रेसले उनकै रणनीतमार्फत सत्ता प्राप्त गरेको थियो। यी जम्मै काम प्रशान्त किशोरले करोडौं रुपियाँ लिएर गरेका हुन्।
तपाईँ पनि पनि राष्ट्रीय दलमा हुनुहुन्छ, चुनाउ जित्नुछ भने प्रशान्त किशोरलाई करोडौं दिएर रणनीति बनाउन लगाउन सक्नुहुन्छ।
प्रशान्त किशोरले आफ्नो रणनीति बनाउँदा ममता व्यानर्जीलाई फाइदा पुग्न सक्ने सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गर्छन्। अनुसन्धान गर्न होस् वा भोटर्सलाई आकर्षित गर्न होस् रणनीति र पैसा दुवैको प्रयोग गर्छन्। उनको इण्डियन पोलिटिकल एक्सन कमिटी अथवा आइप्याक भन्ने कम्पनी छ। जसमा धेरै युवाहरूलाई उनले नोकरी दिएका छन्। आफूलाई काम लाग्नेजति सबै सम्भावनाहरूको प्रयोग गर्ने पिकेको काम गर्ने तरिका हो। बलियो रणनीति बनाउन चाहिने संसाधनहरू उनी कति आउटसोर्सिङ गर्छन् र कति आइप्याकले नै निर्माण गर्छ।
विमल गुरुङ पिकेले आउटसोर्सिङ गरेका संसाधन हुन्। विमललाई प्रयोग गरेर तराई र डुवर्सका गोर्खा भोट तृणमूलको पक्षमा तान्न विमल गुरुङको इमेजलाई प्रयोग गर्नु पिकेको रणनीति हो। विमल गुरुङ आफैले 2021 को चुनाउको लागि पिकेसित आफ्नो डिल रहेको स्वीकारेका छन्।
अर्थात स्पष्ट छ, विमल गुरुङले यसपल्ट पिकेको कम्पनीको एक हिस्सा बनेर पहाड, तराई र डुवर्सको गोर्खा भोटको व्यापारमा हात हालेका छन्।
खोजखबरको अन्तरवार्तामा उनले खुलेर भने, ‘पिकेसित भएको सबै कुरा म खुलेर भन्न सक्दिन। उनी रणनीतिकार भएकोले उनीसित निरन्तर बात गर्नैपर्छ। उनी त्यसै बङ्गाल आएका होइनन्। पिकेसितको मेरो सम्बन्धबारे आज म बोल्न चाहन्न। जब भोलि काम हुन्छ तब भन्ने कुरा हो।’
पहाड, तराई र डुवर्सका गोर्खा जनतालाई पिकेबारे राम्रो जानकारी छैन। पिके चुनावी व्यापारी हुन् भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन। विमल गुरुङले पिकेसित भएको आफ्नो चुनावको व्यापारबारे खुलेर भन्ने कुरा पनि आएन। यसैले विमल गुरुङले खुलेर केही भनिहालेका छैनन्। तर कुरै कुरामा भने केही कुरा भने चुहाएकै छन्।
खोजखबरले गरेको प्रश्नको उत्तरमा विमल भन्छन्, ‘मैले पिकेसित गरेको चुनाउको व्यापार जातिको भलाईको निम्ति हो।’ चुनाउको व्यापारमा जातिको भलाई कसरी हुन्छ? त्यो त विमल गुरुङ नै जानुन्। तर विमलले यो व्यापार निक्कै सोचिसम्झी गरेको भने स्पष्ट छ।
‘पिकेसित गरेको व्यापार मेरो व्यक्तिगत व्यापार हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘यसको निम्ति मैले पोलिटिकल करियर दाउमा हालेको छु। सम्पूर्ण लुटाएको छु। किन भने राजाजस्तो मान्छे भिखारीजस्तो भएको छु।’
जे होस्, विमल गुरुङले कमसेकम यसपल्ट पिकेसित चुनावी व्यापार गरेको स्वीकारोक्ति दिए। भोट बेच्न आए पनि उनले भन्न भुलेका छैनन्, ‘मैले पिकेसित गरेको चुनाउको व्यापार जातिको भलाईको निम्ति हो। मैले जाति र समाजकै लागि त्यसो गरेको हुँ। शरिरमा एक थोपा रगत भइञ्जेल म जातिको लागि यसरी नै लडेको हुन्छु। यसो गर्न मलाई कसैले रोक्न सक्दैन।’